Isbarbardhiga u dhexeeya macaamiisha khariidada (IMS) - Qoorta
Disember, 2007 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Waxaan u isticmaalnay inaan ka wada hadalno isbarbardhigga marka la eego qiimaha, laga bilaabo dhowr meelood oo khariidadaha khariidadaha, markan waxaan ka wada hadli doonnaa isbarbardhigga ku saabsan shaqeynta. Tan awgeed waxaan u adeegsan karnaa aasaas ahaan daraasad uu sameeyay Pau Serra del Pozo, Xafiiska Farsamada ee Cartography iyo Maxalliga SIG (Golaha Deegaanka ee Barcelona) iyo in kasta oo falanqaynta ay ku saleysan tahay oo keliya aaladda lagu qaybiyo suuqa, waxay waxtar u yeelan kartaa markii la go'aaminayo. lacag ku qarash gareynta. Waa lagama maarmaan in la fahmo in waxqabadka adeegga khariidadda, loo fahmay oo keliya in la akhriyo oo loo habeeyo xogta GIS si markaa biraawsarku u soo bandhigo iyaga oo leh qaar "aasaasi ah" oo shaqeynaya. Kuwaas oo ka mid ah howlihii “aasaasiga ahaa” ee aan fahmaynay: -viiri muuqaal, aqoonsi, latalin iyo xiriir fog. -Qaabinta lakabyada, xisaabinta wadada, daabacaadda "dib-u-hagaajin", daabacaad cabbirid.
GeoWeb Weriye (Bentley)
Helitaanka qaababka CAD Ma aqriyo xogta CAD-ga Wuxuu u baahan yahay ArcMap Server Kaliya akhri Microstation Geographics iyo qaababka Oracle Spatial Wuxuu u baahan yahay Server Desing, oo kaliya akhriya DWF Akhri dhammaan qaababka CAD / GIS marka laga reebo Mapinfo Ku dhawaad ​​nooc kasta, laakiin gudaha DB.
Macaamiisha loo baahan yahay Uma baahnid wax dheeraad ah Wuxuu u baahan yahay plugin Java Waxay kaliya u baahan tahay plugin bilaash ah (VPR) Wuxuu u baahan yahay Java Applet Wuxuu u baahan yahay "Micrografx Applet" IIS oo la yimaada Windows
Akhri Oracle Spatial si haa, sidoo kale SQL Server 2008 hooyo si si si Haa, ku dhawaad ​​dhammaan hooyo.
Waxaa lagu kaydin karaa NT iyo Linux Haa, waxay u ogolaataa labadaba Haa, waxay u ogolaataa labadaba si si si Maya, kaliya Windows oo ah ASP.
Xorriyadda oo la xariira qalabka GIS maya Wuxuu ubaahan yahay ArcView inuu yahay xog xog ah maya maya maya Si
Waxay leeyihiin saynisyahanno si si haa, inkastoo ay u baahan tahay barnaamijka Haa, waxay u baahan tahay barnaamijka maya Si
Doorasho taas oo ka fiican, noqotaa mid adag, gaar ahaan tan iyo markii dukumeentigu haysto waqti yar, inkastoo ay kuwan yihiin qaar ka mid ah gabagabada:
Haddii aad qiimeyso inaad ka fogaato dhibaatada ah inaad ku rakibtid fiilo, xulashada ugu fiican waa MapXtreme.
Haddii loo baahdo in lagu daabaco qaababka CAD ama SIG oo ku xiran dayactir joogto ah, Geomedia Web o ArcIMSWaa ikhtiyaarka ugu fiican.
Haddii aad rabto inaad sawirrada ku muujiso qaab CAD ah, oo aan lahayn hawlgal heer sare ah, Bentley Wargeyska Geoweb y MapGuideWaa kuwa ugu fiican.
Haddii aad raadineyso xalyo la mid ah Windows NT iyo UNIX, xalalka ugu fiican waa MapXtreme y ArcIMS
Haddii aad rabto fududayn iyo dhaqaale, GIS Manifold
Dabcan, tani waxay la socotaa barnaamijka macaamiisha ah, ee furan MapBender, MapServer, GeoServer ama MapGuide OpenSource waxay xalliyaan oo kiisaska badan oo leh awood ka weyn kan xalka loo bixiyay.
Qiimaha? ka hor inta aan ka hadalno iyaga, inkastoo Geomedia uusan jirin, laakiin Cadcorp ayaa halkaas joogey. Waa wax la yaab leh in ku dhawaad ​​dhammaanba arrimahan waxaa lagu samayn karaa goobo furan, kuwa aan caan ahayn, inkasta oo waaxda caddaaladda ee dawlad-goboleedku ay u baahan tahay go'aan ah qalab suuqa, marar badan oo loogu talagalay sii wadista ... iyo kuwa kale ee ciyaaraha madow 🙂 Waxaan rajeynayaa in falanqaynta ay faa'iido u leedahay qof, si ay u noqoto mid aad u jahwareersan.
Post Previous«Previous Nidaamyada GIS lacag la'aan ah, maxaad u caan ahayn?
Post Next Khariidada iskudhafka ee codsiyada webkaNext »